Adelaide Hills-Brockhurst Ibhedi kunye nesidlo sakusasa - I-Airbnb
Adelaide Hills-Brockhurst Ibhedi kunye nesidlo sakusasa
Wamkelekile eBrockhurst, igumbi elinomgangatho ophantsi onendlela yayo yabucala kunye nokungena. Isekwe ngo-1887, iBrockhurst ibekwe ngaphakathi kweehektare ezi-2 zeGadi yeNgesi yembali. Ifakwe kufutshane nelali yase-Aldgate, imizuzu emi-5 ukusuka kwi-Stirling enamagqabi, kwaye ijikelezwe ziindawo zokhenketho kunye neendawo zewayini. Oko kwavulwa ngoJuni ka-2018, siye saba neendwendwe ezimangalisayo ezihlala e-Brockhurst. Ibonakalise ukuba yindawo ekhethekileyo yokubhiyozela imihla yokuzalwa, isikhumbuzo, imitshato, amatheko asegadini okanye nje ukubaleka.
Ukusuka kwibalcony yakho yabucala ujonge i-Oak yesiNgesi eneminyaka eli-100 ubudala kunye neentlobo ngeentlobo zeeconifers, imithi evuthulukayo kunye nengqokelela ebanzi yeRhododendrons kunye neCamellias. Umyezo utyelelwa luluhlu olubanzi lweentaka zemveli kunye nezilwanyana zasendle ezifana ne-Kookaburras, i-Black Cockatoos, i-Fairy Wrens, i-Koalas, i-Boobook Owls, i-Brushtail kunye ne-Ringtail Possums.
Iindwendwe zethu ziyakonwabela izinto ezintle ezibandakanya ibhedi enkulu yenkosi, i-sofa etofotofo, itafile yesidlo sakusasa kunye nezitulo. Iingcango eziphindwe kabini zibonelela ngokufikelela kwi-balcony yakho yabucala apho unokuthi uhlale kwaye uphumle ngelixa usonwabela iwayini okanye ezimbini.
Ubunewunewu buyaqhubeka kwigumbi lokuhlambela elikhulu elinebhafu ezimeleyo kunye neshawari ebanzi yeRain Head. IWalk-in Wardrobe inokugcinwa okuninzi kwempahla kunye nemithwalo yokuhlala ixesha elide. Kukho iWifi yasimahla, i-Intanethi kunye nokufikelela okungenamkhawulo kwiNetflix kunye neSpotify. Ukuthuthuzela kwakho kukho i-air conditioning ejikelezayo.
Ikhitshi lakho labucala elixhotyiswe ngokupheleleyo linesinki, ifriji, i-oveni ye-microwave eguquguqukayo kunye nezixhobo zekhitshi eziyimfuneko kunye nezixhobo zokuzilungiselela ukutya kwakho xa utyela ngaphakathi. Ubonelelo lwesidlo sakusasa selizwekazi kunye nezimuncumuncu ezikhethekileyo ziya kunikezelwa ukuqala usuku lwakho lokuhlola i-Adelaide Hills.
4.99 · Izimvo eziyi-241
Indlu, ekufutshane neAldgate Village kumbindi weAdelaide Hills, yimizuzu nje ukusuka eStirling enamagqabi kunye nelokishi yaseJamani yaseHahndorf. Indawo engqongwe yiAdelaide Hills Wineries, apho unokonwabela ukungcamla iwayini.
UDeb kunye noBrian bahlala bephambi kokunika iingcebiso kunye neengcebiso malunga nento oyibonayo kunye namava ngelixa uhlala eAdelaide Hills. Ukuba unayo naziphi na iimfuno ezikhethekileyo okanye iimfuno nceda ungalibazisi ukubuza. Sifuna ukuhlala kwakho e-Brockhurst kube yinto ekhethekileyo kwaye ngaphezu kwayo yonke into, yenza iinkumbulo ezikukhuthaza ukuba ubuyele.
Ukuba ufuna iinkcukacha ezingaphezulu nceda usithumelele i-imeyile. Siyakuvuyela ukuthatha ubhukisho lwakho kwaye sijonge phambili ukudibana nawe.
UDeb kunye noBrian bahlala bephambi kokunika iingcebiso kunye neengcebiso malunga nento oyibonayo kunye namava ngelixa uhlala eAdelaide Hills. Ukuba unayo naziphi na iimfuno ezikhe…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$358
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Aldgate, Adelaide Hills